Vato sy mineraly: toetra, fanasokajiana ary fananganana | Green Renewable
Portillo Alemanina | 07/09/2021 08:54 | Tontolo_iainana
Ny haitao dia ny siansa mifantoka amin'ny fandalinana ny firafitry ny crust eto an-tany izay ahitantsika azy vato sy mineraly. Misy karazana vato isan-karazany eto amin'izao tontolo izao arakaraka ny mampiavaka azy, ny fiaviany ary ny fananganana azy. Toy izany koa ny mineraly. Afaka mitrandraka loharanon-karena voajanahary sarobidy avy amin'ny vato sy mineraly isika, ka izany no antony maha-zava-dehibe ny fandinihan'izy ireo.
Noho io antony io dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny vatolampy sy ny mineraly, inona ny fanasokajiana sy ny maha-zava-dehibe an'ity planetantsika ity.
1 Vato sy mineraly
1.1 Famaritana ny mineraly
1.2 Fanasokajiana ny mineraly
2 Toetra mampiavaka sy karazam-bato
2.1 Vato goavambe
2.2 Vato sedimentary
2.3 Vato metamorphic
Famaritana ny mineraly
Ny voalohany dia ny fahalalana ny famaritana ny mineraly sy ny vatolampy mba hametrahana fototra ary afaka hanazava ny ambiny. Ny mineraly dia misy fitaovana matanjaka, voajanahary ary tsy mitambatra nalaina avy amin'ny magma. Izy ireo koa dia azo aorina amin'ny fiovan'ny mineraly efa misy sy miforona. Ny mineraly tsirairay dia manana rafitra simika mazava, izay miankina tanteraka amin'ny firafiny. Ny fizotry ny fananganana azy koa dia manana toetra mampiavaka ny vatana.
Nanafatra atoma ny mineraly. Ireo atôma ireo dia hita fa mamorona sela izay mamerina ny tenany manerana ny rafitra anatiny. Ireo firafitra ireo dia mamokatra endrika geometrika sasany izay, na dia tsy hitan'ny maso foana aza dia misy.
Ny sela unit dia mamorona kristaly mifangaro miaraka ary mamorona rafitra makarakara na lattice. Ireo kristaly ireo miadana be ny mpamorona mineraly. Ny miadana ny fiforonan'ny kristaly, vao mainka voadidy ny sombiny rehetra ary, noho izany, ny tsara kokoa ny fizotry ny kristaly.
Ny kristaly dia miforona na mitombo arakaraka ny famaky na ny fiaramanidina simetitra. Ny rafitra kristaly dia manangona ireo karazana symmetry 32 izay mety hananan'ny kristaly. Manana ny sasany amin'ireo lehibe izahay:
Mahazatra na kiobika
misy lafiny enina
Fanasokajiana ny mineraly
Kristaly mineraly tsy mitoka-monina izy ireo, fa mamorona fitambarana. Raha misy kristaly roa na maromaro maniry amin'ny planina mitovy na axis an'ny symmetry, dia heverina ho rafitra mineraly antsoina hoe kambana izy io. Ohatra iray amin'ny kambana dia quartz rock kristaly. Raha rakotry ny mineraly ny vaton'ny vatolampy dia hamorona clumps na dendrites izy ireo. Ohatra, pyrolusite.
Mifanohitra amin'izany no izy, raha mihodina ao anaty lavaka vato ny mineraly, dia miorina ny rafitra antsoina hoe geode. Ireo geode ireo dia amidy eran'izao tontolo izao noho ny hatsaran-tarehy sy ny haingon-trano. Ohatra iray amin'ny geode dia mety ho olivine.
Misy fenitra samihafa amin'ny fanasokajiana ny mineraly. Raha ny firafitr'ireo mineraly dia azo sokajina mora kokoa izy io. Mizara ho:
Metal: Mineraly metaly noforonin'ny magma. Ny malaza indrindra dia ny varahina sy volafotsy, limonite, magnetite, pyrite, sphalerite, malachite, azurite na cinnabar.
Tsy metaly. Anisan'ireo tsy metaly, manana silika isika, ary ny dioxide silika no tena singa ao aminy. Magma ao amin'ny asterosfera izy ireo. Izy ireo dia mineraly toy ny olivine, talc, muscovite, quartz ary tanimanga. Manana sira mineraly koa isika, izay noforonina avy amin'ny sira izay miakatra rehefa mipoaka ny ranomasina. Izy ireo koa dia azo aorina amin'ny alàlan'ny famerenana amin'ny laoniny ny mineraly hafa. Izy ireo dia mineraly noforonin'ny rotsakorana. Ohatra, manana kalite, halite, silvin, gypsum, magnesite, anhydrite, sns isika. Farany, manana mineraly hafa miaraka amina singa hafa isika. Ireo dia noforonina tamin'ny alàlan'ny magma na recrystallization. Mahita fluorite, solifara, grafita, aragonite, apatite ary kalite isika.
Toetra mampiavaka sy karazam-bato
Ny vatolampy dia misy mineraly na fitambaran'ny mineraly tsirairay. Amin'ny karazany voalohany dia manana granite isika, ary amin'ny mineraly dia manana sira rock isika ohatra. Ny fananganana vatolampy dia dingana miadana tokoa ary manaraka dingana hafa.
Araka ny fototry ny vato dia azo zaraina telo izy ireo: vatolampy igneous, rock sedimentary, and metamorphic vato. Tsy maharitra ireo vatolampy ireo fa mivoatra sy miova hatrany. Mazava ho azy fa fiovana niseho nandritra ny fotoana geolojika izy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, amin'ny ambaratonga olombelona, ​​dia tsy hahita endrika vatolampy na famotehana tena tanteraka isika, fa ny vato kosa manana ny antsoina hoe boriborintany.
Ny vatolampy igneous dia vatolampy natsangan'ny fihenan'ny magma tao anaty tany. Izy io dia manana ampahany simika amin'ny palitao antsoina hoe astenosfera. Ny magma dia azo atao mangatsiaka ao anaty vovon-tany na mety hampangatsiaka azy amin'ny alàlan'ny herin'ny crust eto an-tany. Miankina amin'ny toerana ampampangatsiahana ny magma, ny kristaly dia hiforona amin'ny hafainganam-pandeha samihafa amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa, ka miteraka firafitra isan-karazany, toy ny:
Granulated: Rehefa mangatsiaka tsimoramora ny magma ary manjelanjelatra ny mineraly, dia potika mitovy habe amin'izany no hita.
Porphyry: vokarina ny magma rehefa mangatsiaka amin'ny fotoana samihafa. Tamin'ny voalohany dia nanomboka nangatsiaka moramora izy io, saingy avy eo dia niha haingana dia haingana kokoa.
Vitreous. Antsoina koa hoe firafitra porous izy io. Mitranga izany rehefa mangatsiaka haingana ny magma. Amin'izany fomba izany, ny kristaly dia tsy miforona, fa manana endrika fitaratra.
Izy ireo dia vita amin'ny akora nopotehin'ny vato hafa. Ireo zavatra ireo dia entina ary apetraka amin'ny fanambanin'ny renirano na ny ranomasina. Rehefa miangona izy ireo dia mamorona formations. Ireo vatolampy vaovao ireo dia miforona amin'ny alàlan'ny fizotrany toy ny petrification, compaction, simenitra ary recrystallization.
Vato miforona avy amin'ny vato hafa izy ireo. Matetika izy ireo dia vita amin'ny vato sedimentary izay nandalo ny fiovan'ny vatana sy ny simika. Ireo singa ara-jeolojika toy ny tsindry sy ny mari-pana no manova ny vatolampy. Noho izany, ny karazana vatolampy dia miankina amin'ny harena an-kibon'ny tany ao aminy sy ny haavon'ny fanovana naterany noho ny antony ara-jeolojika.
Betsaka ny fizotran'ny metamorphic izay mahatonga ny vato hiova sy hivoatra. Ohatra, ny fahasamihafana tampoka amin'ny mari-pana dia antsoina hoe thermoclastimankany Izy io dia dingana iray izay mahatonga ny fahasamihafana tampoka eo amin'ny mari-pana eo anelanelan'ny andro sy ny alina, toy ny mitranga any an'efitra, mety hiteraka famakiana sy fanimbana vatolampy. Toy izany koa no mitranga amin'ny fizotran-drivotra vokatry ny rivotra sy ny rano. Ny fikaohon-drivotra na ny hatsiaka ary ny fihoaran'ny rano izay mety hiafara amin'ny vaky ny vato dia mahatonga azy ireo metamorphose.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny vato sy ny mineraly ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Vato sy mineraly